विश्वकप फुटवलमा आज कुन–कुन टिम भिड्दै ? - Deshko News Deshko News विश्वकप फुटवलमा आज कुन–कुन टिम भिड्दै ? - Deshko News
विश्वकप फुटवलमा आज कुन–कुन टिम भिड्दै ?
काठमाण्डौँ, असार १३
विश्वकप फुटबलमा आज पनि चार खेल हुनेछन् । आज समूह ‘ई’ र ‘एफ’ का अन्तिम चरणका लिग खेल हुन लागेका हुन् ।
समूह एफ मा मेक्सिको, जर्मनी र स्विडेन अर्काे चरणमा उक्लिने होडमा रहेका छन् ।
आज बेलुकी पौने ८ बजे हुने खेलमा जर्मनी र दक्षिण कोरिया तथा मेक्सिको र स्विडेन भिड्नेछन् । दुई खेलबाट ६ अंक जोडेको मेक्सिकोलाई स्विडेन विरुद्धको खेल बराबरी गरे पुग्नेछ । उता ३ अंक जोडेको स्विडेनलाई भने यो खेल जित्नैपर्ने दबाब छ । समूहमा एक जित र एक हारका साथ ३ अंक जोडेको जर्मनीलाई पनि आजको खेल जित्नुपर्ने दबाब छ ।
दक्षिण कोरियासँग बराबरीमा रोकिएको अवस्थामा भने जर्मनीलाई राउण्ड अफ सिक्सटिनमा पुग्न अर्काे खेलमा स्विडेन हार्नैपर्ने हुन्छ । विश्वकप फुटबलको समुह ई मा आज राती पौने १२ बजे हुने खेलमा ब्राजिल र सर्विया तथा स्विट्जरल्यान्ड र कोष्टारिका भिड्नेछन् । यो समुहमा ब्राजिल र स्विटजरल्याण्डको ४/४ अंक छ भने सर्वियाको ३ अंक छ ।
अर्काे चरणमा उक्लिन ब्राजिललाई यो खेल कम्तिमा बराबरी गर्नुपर्नेछ भने सर्वियालाई जित्नैपर्ने दबाब छ । उता स्विट्जरल्यान्डले पनि कोष्टा रिका विरुद्धको खेल बराबरी गरेको खण्डमा ऊ राउन्ड अफ सिक्सटिनमा छनौट हुने छ ।